Ukutyhola uNobhala-Jikelele we-UNWTO kumenza ijaji kunye nejaji
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » Ukutyhola uNobhala-Jikelele we-UNWTO kumenza ijaji kunye nejaji
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
UNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili
Ubulungu be-UNWTO buquka amazwe angama-159 angamaLungu, amalungu angama-6 aMalungu kunye namalungu angama-500 aManyeneyo amele icandelo labucala, amaziko emfundo, imibutho yezokhenketho kunye nabasemagunyeni kwezokhenketho.
Umntu ophetheyo nguNobhala-Jikelele uZurab Pololikashvili. Ungusopolitiki kunye nozakuzaku waseGeorgia, abanezakhono kwaye baqeqeshelwe ukuphathwa kwezopolitiko. Eli nqaku liza kubonisa ukuba ngekhe abenaloyiko xa ethatha isigqibo sokuqhuba le arhente ibumbeneyo ye-UN njengeshishini lolwaphulo-mthetho.
Iiarhente ezikhethekileyo ze-UN yimibutho ezimeleyo yezizwe ngezizwe esebenza kunye amazwe adbeneyo.
Bonke baziswa kubudlelwane kunye ne-UN ngezivumelwano ekuxoxiswene ngazo.
Abanye babekho ngaphambi kweMfazwe yokuQala yeHlabathi. Abanye banxulunyaniswa noManyano lweZizwe. Ezinye zenziwe phantse ngaxeshanye ne-UN. Ezinye zenziwe yi-UN ukuhlangabezana neemfuno ezivelayo kwaye kubonakala ngathi ziimfuno zobuNobhala-Jikelele be-UNWTO.
Ihlabathi lisengxakini, ngokukodwa, umhlaba wezokhenketho wonakele yi-COVID-19. Ubunkokeli obusebenzayo kuMbutho wezoKhenketho weHlabathi, ukuBambisana phakathi kwe-UNWTO kunye ne-WTTC ngumba ophambili, kodwa akukho nto yenzekileyo ukusukela oko UZurab Pololikasvili waba nguNobhala-Jikelele nge-1 kaJanuwari 2018.
Ngelishwa, enye indoda ephethe i-UNWTO, uNobhala-Jikelele uZurab Pololikashvili ukwazile ukudlala amakhadi akhe. Ingxaki kuphela kukuba, wabekwa ekuphatheni ngobuqhetseba, ubuqhetseba bonyulo obunokwenzeka, kwaye ngoku uphethe ityala lokumamela kwaye enze isigqibo ngaso nasiphi na isikhalazo nxamnye naye.
Elona candelo lilusizi kukuba, uninzi lwamazwe angamalungu e-UNWTO anoxanduva kwezopolitiko, kwaye awuzukuwuchaphazela lo mbandela. Amanye amazwe awayiqondi nje, bambalwa abanokungakhathali.
Umnumzana Zurab Pololikasvili ngokuqinisekileyo ngekhe abenguNobhala-Jikelele UZurab Pololikasvili namhlanje, ukuba unyulo luka-2018 beluqhutywa ngokungenamkhethe nangemigaqo.
Kucacile ukuba imithetho yaphulwe kwintlanganiso ye-2017 yeBhunga eliLawulayo eMadrid, kwaye kwakhona kwi-General Assembly e-Chengdu kwi-2018, evumela UZurab Pololikasvili ukuba anyulwe kuqala kwaye okwesibini aqinisekiswe. Isenokuba lulwaphulo-mthetho olugqibeleleyo.
Isigqibo esenziweyo senzekile emini xa uNobhala Jikelele wangaphambili uGqirha Taleb Rifai waxelelwa ngabom ngumcebisi wakhe wezomthetho owathi kamva wafumana inyuselo enkulu nguNobhala Jikelele wangoku. UZurab Pololikasvili.
Emva kwe-3 iminyaka eTurboNews Ekugqibeleni ndifumene uhlalutyo olusemthethweni lwenkqubo kwaye iceba ukuyipapasha kule veki.
Amazwe ebethumela iifizi zobulungu kwi-UNWTO eMadrid. Bebekade beyithumela kumbutho oqhutywa ngumntu omnye kwaye uninzi luthi balekeleni izibonelelo zakhe, UZurab Pololikasvili. Injongo yokugqibela ye-Zurab Pololikasvili kukuba yi-Nkulumbuso yase-Georgia.
UZurab Pololikasvili ngoyena mntu angajonganga i-Arhente yeZizwe eziManyeneyo kuphela kodwa ikwangulo mntu uya kuba nesigqibo sokugqibela kuyo yonke imiba okanye izikhalazo. Ungumgwebi kunye nejaji kwi-UNWTO. Ikomidi lokongamela le-UN aliloxanduva lwe-UNWTO.
Nangona umba wobuqhetseba kunyulo luka-2017/18 ungaziswa ngaphambili, akukho ziphumo kulowo utyholwayo ngeli xesha.
Iziphumo ziya kuba ze-UNWTO General Assembly kulo nyaka ukwala ukuqinisekiswa kwe UZurab Pololikasvili wexesha likaNobhala-Jikelele oqala ngo-2022.
Akucaci ukuba le ndibano iza kubanjwa nini kwaye phi. I-GA ecwangcisiweyo ngo-Okthobha eMorocco iya isiba ngakumbi nangakumbi.
Esi isenokuba sisicwangciso sisonke. Ngamazwe amaninzi angamalungu e-Afrika, abanakho ukuthumela umphathiswa eMadrid, ukuba umsitho ubuyiselwe kwindawo apho ikomkhulu le-UNWTO Isiqinisekiso siza kuba lula kakhulu xa amazwe ambalwa esiya kwindibano ngokubanzi.
Ingaphezulu nje kwenyanga ukuya kwiNdibano Jikelele yaseMorocco, kwaye akukho nto ukuza kuthi ga ngoku icetywayo okanye yabhengezwa. Oku kunokuba sisicwangciso sokucwangcisa kwangaphambili uZurab Pololikasvili.
Kufuneka wenze ntoni xa kukho umba kwi-Arhente ye-UN?
IOfisi yeZizwe eziManyeneyo yeeNkonzo zoLawulo lwaNgaphakathi yi-ofisi ezimeleyo kwi-Ofisi yoNobhala weZizwe eziManyeneyo enegunya “lokunceda uNobhala-Jikelele ekufezekiseni uxanduva lokongamela ngaphakathi kwimithombo yobutyebi kunye nabasebenzi boMbutho.
Le arhente nangona kunjalo ayinamagunya kwi-arhente edibeneyo ye-UN, kubandakanya noMbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO)
Yintoni iArhente yokuNxulumene ne-UN njenge-UNWTO?
Inkqubo ye-UN ibunjwe ngoonobhala abaphambili kunye nemali elawulwa ngokwahlukeneyo kunye neenkqubo kunye neearhente ezikhethekileyo.
Umzekelo, imali kunye neenkqubo zibandakanya iNgxowa-mali yaBantwana yeZizwe eziManyeneyo kunye neNkqubo yeZizwe eziManyeneyo yoPhuhliso, eneebhodi ezilawulayo kunye neentloko zesigqeba kodwa ziphantsi kwegunya likaNobhala Jikelele we-UN. Ngokwahlukileyo, iiarhente ezikhethekileyo, ezinje nge-Food and Agriculture Organisation, i-World Tourism Organisation (i-UNWTO) zineebhodi zazo ezilawulayo kunye neentloko zesigqeba kwaye azikho phantsi kwegunya lika-Nobhala Jikelele we-UN.
Iiarhente, ezizimeleyo ngokusemthethweni imibutho yamazwe ngamazwe enemithetho yazo, ubulungu, amalungu, kunye nezixhobo zemali, zaziswa kubudlelwane neZizwe eziManyeneyo ngezivumelwano ekuxoxiswene ngazo.
The Umbutho wezoKhenketho kwiHlabathi liphela yiarhente yeZizwe eziManyeneyo inoxanduva lokukhuthaza ukhenketho olunoxanduva, oluzinzileyo nolufikeleleka kwindalo iphela
UNobhala-Jikelele we-UNWTO uyintloko ye-Arhente ezimeleyo ye-UN. Ithetha ukuthini:
Isikhalazo malunga nokukhohlisa, urhwaphilizo kunye nobuqhetseba kunyulo luka-Nobhala we-UNWTO ngo-2017/18 liza kugqitywa ngummangalelwa.
Ukunyanzeliswa kunye nokuthandwa ngu-2021 UNWTO Nobhala Jikelele kwi-2021 kuya kugqitywa ngummangalelwa.
Ngelishwa, i-UN ayisayi kujonga isikhalazo esinjalo. Kwintsapho ye-UN, iiarhente ezikhethekileyo zizimeleyo, akukho gunya lolawulo. I-UN ngokwayo ayinalo igunya kwamanye amaziko.
ICandelo lokuHlola eliDibeneyo, eliyiqela eliqhelekileyo leNkqubo ye-UN linokuyijonga. Akunakulindeleka ukuba lo mzimba ubandakanyeke, Inika ingxelo kwi-UNWTO uqobo, ingathethi mntu wumbi.
Hlala ujonge iingxelo ezizayo eTurboNews ngalo mbandela.
Oktobha 20, 2021 kwi-13: 30
umfanekiso weskrini دردشة العراق شات عراقي شات ذهب شات عراقنا شات بغداد
UMary Tomita uthi:
Agasti 30, 2021 kwi-05: 45